Abazali abanothando abanandaba kuphela nenani lamathoyizi ingane yabo enayo. Kubuye kubalulekile kubo ukuthi bahloniphekile, banentshisekelo futhi bawusizo ngemvuthuluka, njengokuthi, isisu sokuthuthukisa ingane. Noma kunjalo, ezinhlobonhlobo zemikhiqizo yezingane, ezinikezwa abakhiqizi banamuhla, kulula ukulahleka. Ngakho ukhetha kanjani ithoyizi lekhwalithi eliwusizo lomntwana wakho?
Ukukhulisa umthamo wengane - umshini onemibala wezinto eziqinile, ezivame ukungena. Lezi zinsuku zenzelwe izingane ezincane kakhulu ezifunda ukuhamba. Amagundane anjalo ahluke kakhulu: kusuka elula, esincane ngobukhulu nge-appliqués elula, emisebenzini yangempela yobuciko. Inketho yesibili iyinwebu enkulu enemibala enezinhlaka zokuthuthukiswa ezibalulekile, amathoyizi okulenga kanye nokufakwa komculo (isibonelo, ukuthuthukisa i-Tiny Love Rug "Zoo").
Ukuze uqinisekise ukuphepha kwetheyizi, kufanele ucele umdayisi ukuthi athenge ipasipoti ekhethekile, ekhonza njengesiqiniseko sekhwalithi. Izinto ezivela lapho umntwana okhulayo ayenziwa kumele abe non-toxic. Futhi, kufanele ihlanzwe kalula futhi ihlanzwe, futhi imininingwane kanye nezakhi zomklamo wokuthuthukiswa kufanele zigcinwe ngokuphepha emgqeni.
Ukuthuthukisa i-carpet, ukubuyekezwa ngalokho okungafundwa kumaforamu amaningi omama, kufanele kukhethwe ukucabangela ubungako ekamelweni labantwana. Namuhla ungathenga umkhiqizo kwanoma yisiphi isayizi - kusuka ezincane kuya ezinkulu kakhulu, uhlala kakhulu ekamelweni. Izinhlobonhlobo zobunjwa nazo ziyamangalisa: kunamamodeli ngokwejwayelekile okwesibhakabhaka, oval, nxazonke, njll. Kulula kakhulu uma ibhola libhalwa. Ngenkathi ingane yakho ilele, ingasuswa, ikhulule isikhala. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo enjalo iyinkimbinkimbi kakhulu, ngeke isithathe isikhala esiningi kumakamelo noma emithwalini ngesikhathi sokuhamba.
Kumele kuqashelwe ukuthi imidwebo emagumbini akufanele ibe mhlophe kakhulu futhi ilaka. Kungcono ukukhetha ukukhansela ngezinhlelo ezicacile ze-shadow shades. Kanti futhi, ingane ekhulayo iqala ukuba khona kwazo zonke izinhlobo zezinto ezizoba nesithakazelo kumntwana. Uyozihlola ngokuzithandela futhi azizwe izintambo, izindandatho, izigqoko, zijwayele izinto ezihlukahlukene, zibe ngomunwe noma zizame ngezinyo, okubalulekile ekuthuthukiseni ukucabanga okungokomfanekiso namakhono amakhono okuhamba kahle.
Ngokuvamile ama-rugs wezingane anesitokisi esithintekayo esithintekayo. Yiqiniso, zikhonza kuphela njengendlela yokubona, ingane ingakwazi ukunqoba kalula "izithiyo" ezithambile, ngakho akufanele kuthathwe njengethuluzi lokuphepha. Ngokuvamile ekuthuthukiseni kukhishwa umcamelo okhishwayo noma owakhelwe ngaphakathi. Emagumbini anjalo kuzoba lula kakhulu ukulala amantombazane amancane kakhulu.
Phakathi kwama-novelties emakethe yezingane zamathoyizi, amamodeli ekuthuthukiseni ama-rugs anepaneli yomculo athole ukuthandwa, okuzokwethula izingcezu kumculo we-classical, umsindo wezilwane ezihlukahlukene, njll Kubalulekile ukuthi umculo awukhulu kakhulu futhi uphawule, ukuze ungalimazi ukuzwa kwengane.
Njengoba ungabona kuzo zonke ezingenhla, ukukhula komntwana okuzokhula kuzokusiza ukunikeza ingane yakho isipiliyoni esithakazelisayo nokumfundisa okuthile okusha.
Sithenga insimbi yomgwaqo
Kusukela kwenzani u-inki: ukwakheka. Indlela yokwenza i-ingin yangempela: imiyalelo nesinyathelo ngezinyathelo nezincomo
Funny futhi enhle inhlanzi-bettas. Okuqukethwe Betta ekhaya
Wobuciko Delicious - risotto nge-prawn